Sary 8 mihetsika sy ho an'ny FreeBSD | Avy amin'ny Linux
Omaly izy ireo sary wallpaper ho an'ny Gentoo, ary androany no sary an-tsary ho an'ny FreeBSD ????
Tsy misy antenaiko hahafaly ny maro ... satria tsy ny GNU / Linux no zava-drehetra 😉
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fisehoana / personalization » Sary 8 mihetsika sy ho an'ny FreeBSD
Te-hanandrana ny freeBSD foana aho .. .. fa ny arch dia tena ahazoana aina xD
Tsara, rafitra iray hafa izay tena tiako sy ampiasaiko, raha ny marina dia manana fampianarana marobe amin'ny tranokalako momba ity OS mahafinaritra ity aho.
Tsy dia sarotra loatra ny mampiasa azy io ary toy ny mandany fotoana handrindrana ny hoe Gentoo, saingy manana fahefana be sy fitaovana maro izy io.
Misaotra ny sary an-tsary nanana ny fahatelo
Mitovy ny eritreritro momba ny BSD.
Fa mampitaha ny isan'ny fonosana na programa amin'ny linux
Tsy vitsy ve?
Ny zavatra tsara dia ny ahafahanao mametraka linux (kernel) ary mampiasa ireo programa misy azy.
Amin'ny fomba ofisialy izy ireo
Vonona ny hampiasa, amin'ny Linux dia tsy fantatro tsara hoe firy ny fonosana.
ankoatry ny fandefasana linux, any no itovizan'ny ampahany amin'ny hery, FreeBSD ny mifanentana amin'ny binary miaraka amin'ireo fonosana linux amin'ny alàlan'ny fandefasana ny modely linux
sudo kldload linux (raha manana sudo ianao)
Ankoatr'izay dia afaka mametraka divay ihany koa ianao
Ary ho fanampin'ny fandaharan'izy ireo manokana izay tena tsara
Opera, VLC, Vim, Firefox, programa Gnome, KDE, sns (Mazava ho azy fa misy koa Linux)
Manoro hevitra ny FreeBSD aho 😀
"Manoro hevitra ny FreeBSD aho"
Miorina amin'ny tohan-kevitra ara-teknika inona?
Noho ny antony _teknika_tokana izay tokony hametrahana FreeBSD anio dia noho ny ZFS.
Toy ny "Miorina amin'ny tohan-kevitra ara-teknika inona?"
Rafitra iray no ampiasaina raha te hampiasa azy ianao, atoro azy aho satria tsara dia tsara izany, amin'ny fepetra ara-teknika dia ho hitanao ny tenanao raha mety aminao na tsia, dia toy ny miteny amin'ny pejy Windows io.
Manoro hevitra ny Linux aho
Ary misy miteny
"Miorina amin'ny inona ny hevitra ara-teknika"
Ho lava be ny valiny
Ny rafitra miasa dia miasa amin'ny zavatra samy hafa ary raha misy ny "tohan-kevitra" hampiasaina, raha misy manaraka ny torohevitro dia ho tsapany ny zavatra lazaiko (fa raha manompo ny adalany izy).
Ny marina dia nahatsikaritra teboka fampitahana tamin'ny fanehoan-kevitrao aho, tamin'ny alàlan'ny Linux vs FreeBSD, GPL vs BSD
Saingy tsy mila mampitahanao ny rafitra tsirairay dia tsara amin'ny zavatra iray ary tsy misy manery anay hampiasa azy ireo, ankoatry ny fampitahana dia tsy misy mivoaka tsara na inona na inona.
PS: Unixero aho, koa mampiasa OS X, NetBSD, IOS, ankoatry ny hafa, koa aza raisina am-pitandremana ny tolo-kevitro (raha tsy Unixeros mazava ho azy ireo).
"Ary raha misy manana ny azy" ???
Ny tiako holazaina dia
ary samy manana ny azy avy
Mampiasa Arch aho ary azoko tsara ny fampitahana, ny vaovao farany amin'ny fonosana taloha indrindra, ao amin'ny andohalambo dia efa mampiasa gnome-shell-3.6.1-3 sy amin'ny freebsd gnome2 aho.
Soa ihany fa mbola misy Quixotes eto amin'ity izao tontolo izao ity, mampalahelo ahoana ny andro hahafatesan'ny farany amin'izy ireo !!
(Ity sary kely ity dia mety ho tsara amin'ny horonam-taratasy fidiovana)
"Amin'ny horonam-taratasy fidiovana"
Miala tsiny aho raha misy fanehoan-kevitra manala baraka an'i FromLinux na amin'ny msx
Miala tsiny amin'ny hevitra nataoko
Te-hisaotra ireo sary am-pahefana fotsiny aho, tsy hiverina intsony izany
Fandefasana trosa fotsiny 😉
"Ny zavatra tsara dia ny ahafahanao mametraka linux (kernel) ary mampiasa ny programa misy azy."
Manomboka amin'ny kinova manaraka azy, ny FreeBSD dia hijanona tsy hampiasa ny compiler GCC hampiasa CLANG, hifindra lavitra araka izay azo atao avy amin'ny FSF, GNU-userland ary ambonin'ny GPL rehetra.
Heveriko fa ho an'ny mpizara dia mbola iray amin'ireo safidy tsara indrindra izy io, na dia misy distros toa Slackware, Fedora / Cent OS (izay mampiditra SELinux hatrany am-piandohana aza), Debian na Funtoo ary tetikasa toa an'i Gentoo Hardened Kernel Heveriko fa ny faritra [Servers] dia rakotra tsara amin'ny alàlan'ny rafitra maoderina sy miovaova kokoa.
Amin'ny lafiny iray dia napetrako ny Arch amin'ny zava-drehetra ary tsy nanana olana mihitsy aho 🙂 Ny kernel tsara ampiasaina amin'ny famokarana dia ilay fehezin'ny fahasalamana: http://www.grsecurity.net
Ny farany tsara tarehy, ny hafa…. feillos eeeh !!!